ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကူညီချင်လွန်းသူ”
တတ်နိုင်ပါပေ့ ကိုပေါရာ။ ဘာများလဲလို့ ဖတ်နေတာ။ အဆုံးသတ်ခါနီးမှ ထည့်သွားသကိုး။
ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ ၀ိုင်းကြီးသိမ်းသွားတော့ ကျနော့်မောင်လေး တေးမွန်လေးက ကိုပေါကို လွမ်းတယ် လို့တောင် ပြောနေတယ်။ ဒိုင်လည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အကောက်ကလေးတော့ ပေးပါဦး။ အမေ့မခံနဲ့လေ။ :)
ပြောရင်း နဲ့ နိုင်ငံရေးတွေ ပါလာပြီ
နိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နေ့ စဉ်ဘ၀အရေးဆိုတော့လဲ…ဖြစ်စဉ်တွေက သွယ်ဝိုက်သာဓက ဖြစ် နေတာပ..
ကိုပေါ… ဘောလုံးကန်ကောင်းပုံရတယ်… အဆွဲလဲကောင်းတယ်… မထင်မှတ်ပဲ ဂိုးသွင်းတတ်တဲ့နည်းပညာလဲ ရှိတယ်… အဲလို ရေးတတ်ချင်တယ်… ကိုပေါသရုပ်ဖော် ပန်းချီလေးတွေလဲ ကြိုက်တယ်…
စေတနာကို မစော်ကားနဲ့လေ.... ဟဲဟဲ
ရေးတတ်လိုက်တာ လို့ ဘဲပြောချင်ပါတော့တယ်...။
Lab ထဲကလူတွေ ကျွန်တော်ရယ်နေလို့ လှည့်ကြည့်ကုန်ပြီ။
ကိုပေါဆုံခဲ့တဲ့လူကတောင် တကယ် စေတနာရှိလို့ ကူချင်တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်ဦးမှာ
အတင်း ကယ်ချင်သူကို တီးပစ်လိုက်စမ်းပါရှင် ခပ်နာနာလေး...
ခုမှ ရောက်ဖူးတာပါ. ဖေးဖရိတ်ထဲ ထည့်လိုက်ပြီ။
As usual, your post does not fail to give me food for thought. Like you did to this unwelcome helper, we must be prepared to say NO to the Burmese junta inaunanimous and strong voice. I do hope we will get the chance to get rid of this military rule in Burma in our time. I do not want to pass along the current type of Burma to my son.
တပုဒ်လုံး အစအဆုံး ဖတ်မိတာ ဒီတခါ ပထမဆုံးပါ။
ကပေါ ပြောလိုက်တော့ တိုင်းပြည်ကို ကယ်နေသူတွေ ဘာပြန်ပြောသလဲ...။ကနေ့ ကံမကောင်းပါလား..တဲ့လား။
ဒီတစ်ခေါက် တို့ရန်ကုန်က ပြန်လာောတ့ လေယဉ်မှာ window seat ထိုင်တယ။် အလည်က ခလေးမ ကလှူပ်တုတ်လှူတ်တုတ်နဲ့အငြိမ်မနေဘူး. ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင်လိုက်ချလိုက် လုပ်နေတယ။် လေယဉ်တက်ခါနီးမနေနိုင်တဲ့တို့ သတိပေးလိုက်တယ။်ပေါင်ပေါ်က ပိုက်ဆံအိတ်ကို အောက်ကိုချလိုက်ပါလို့။ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ။် သမီးက စိတ်ပုတိးထုတ်မလို့ပါတဲ့၇ှက်လိုက်တာ။အလကားနနေ ကူညီချင်နေတဲ့တို့ဆရာကြီးလုပ်ရာကြသွားတယ။် နောင်ဆင်ခြင်မှ..လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။